Alakamisy 05 Septambra 2019. – FJKM
Alakamisy 05 Septambra 2019.
2 Korintiana 1.12-24
Ambaran’ny Soratra masina aminao anio indray ny fahamarinan’ny kristiana ao amin’i Kristy .
1-Rehefa ENY dia ENY / TSIA dia TSIA
Tandremo! Tsy mba miroa teny na mandainga ny kristiana ao amin’i Kristy . Olona azo itokisana amin’ny teny aloaky ny vavany ny mino. Tsy miombona amin’ny vavolombelona mandainga ny kristiana ao amin’i Kristy. « Ary izay zavatra kasaiko, moa kasaiko araka ny nofo va , mba hanaovako eny eny foana , sy tsia tsia foana ?« (1.17). I Jesoa Kristy, Ilay ao anatinao dia ENY sy AMENA mandakizay . « Fa na firy na firy ny teny fikasan’ Andriamanitra , dia ao aminy ny eny ,ary amin‘ny alalany koa ny Amena ho voninahitr’ Andriamanitra amin’ny ataonay » (1.20).
2-Marina isika satria vita tombokasen’ Andriamanitra
Ny tombokase dia fahamarinam-pototry ny fiziana tsy azo ovaina na soloina na esorina. « Izay nanisy tombokase antsika koa ka nanome ny Fanahy ho santatra ato am-pontsika » (1.22). Vitan’ Andriamanitra tombokase tamin’ny Ran’i Jesoa teo amin’ny hazo fijaliana ny fahamarinanao . Marina ianao ka sahia! (Efes 4.30).
3-Andriamanitra no vavolombelon’ny fahamarinanao
« Ary Izaho miantso an’ Andriamanitra ho vavolombelona ny amin’ny fanahiko… »(and 23). Aza matahotra fa na aiza na aiza misy anao dia vavolombelon’ny fahamarinanao Andriamanitra « (Lio 12.11/Asa 14.3/ Mat 28.20 / Apo 3.14) .